Seenaa Gabaabduu Obbo Mahdii Haamid Muudee(Abbaa Bariisaa) | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ January 23, 2021 June 22, 2021
Amajjii 23, 2021
Haalaa akkanatti deemu, dhuma sagantaa qophii isaa, Ayyuub, Afaan Oromoo tiin dhaamsa xixiqqaa daddabarsuu jalqabe. Haalli kuni, mootummaa Habashaa bira dabree, kan waahelaaf eegu dallansiise. Waahelli Ayyuub, ilmi Gaarradaw Cuuphataa, Ayyuub afaan raadiyoona-rratti ittiin haasaween dhoorkamaa taheen dhaamsa dabarsaan baannatamee, biyya alagaa keessatti mana heeraa dhaabbate. Dubbiin akkasitti jalqabde, ji’a Birraa tan bara 1962 keessa, raadiyoona Soomaalee-rraa faraqaa afaan Gaallaa tiif karaa bantee, Ayyuub gaggeessaa isii muudame.
Geetaachoon, absumaan Cuuphataa, Oromtichi, biyya Soomaalee keessatti afaan isaa gatee, kan Amaaraa tiif abokaattoo tahe. Gama biyya keessatiin durii fii arrallee, Oromoonni kan isaaniitti duuyda galanii, afaanii fii aadaa Amaaraa goddisuu keessatti qooda leencaa gumaachan heddu. Haala kanaaf, Xaggaayee Gabre Mad’hin, Xilaahun Gassasaa fii Buzunesh Baqqalaa fakkeenya laachuun ni dandayama.
Mahdiin barnoota kutaa duraa magaalaa itti dhalatetti baratee tan lamadaa tiif Dirree Dhawaa bu’e. Achitti Mana barnoota Lula Raasa Makoonninitti sagalii fii kudhan akka barateen cimina barnootatti qabuun filamee mana barnoota Luul Ba’ida Maariyaam kan Finfinnee, kan barattoota qaroo qofaaf ramadame geeyfame. Amata lama booda, achirraa, qabxii ol aantuun kudha lama goolabee, Universitii Finfinnee damee Kiiloo Afuriitti barataa saaynsii galmaawe. Akka barnoota universitii xumureen, magaalaa itti dhalatetti barsiisaa mana barnoota kutaa lamadaa tahe.
Wanni gaariin ijibbaata Mahdiin godherraa arkame, inni/Mahdiin, damee farra-wallaalummaa ykn jaahilummaa dhabamsiiftu tan waajjira Zamachaa jala jirturratti itti gaafatamummaa afaan Oromoo muudamuu dha. Mahdiin hujii irratti ramadameen yaroo duraa tiif kitaabni, afaan Oromoo, qubee Gi’iziin, biyya san keeysatti akka maxxanfamu godhe.
Yaroon Mahdiin karaa Bariisaa tiin afaan Oromoo guddisuuf itti marxifate tuni, yaroo, horteen nafxanyaa tan maqaa Ihaappaa tiin if jaarte, akkuma ammaa kanatti, Oromoo fii Oromummaa gurraan dhagayuu itti hin barbaanne ture. Gochi isaa Ihaappaa malees, mootummaa fii warra Me’eesoon birattiis kan ija diimtuu agarsiisu tahe. Keeysaa huu, yaroo garii, qubeen Laatiin tan Gi’iz caalaa afaan Oromoo ittiin barreeysuuf sirrooma qabaachuu agarsiisuuf waan qubee Laatiniin yaanni irratti barreeyfamuuf, yaroo sanitti, hegereen Mahdii, waahellanii fii Bariisaa harka Rabbii turte jechuun ni dandayama.
Amna jiruu baqaa keessaa fii eega Ameerikaa qubatees, Mahdiin guddina afaan Oromoo tiif dhimmamuu takkaa hin dhiifne. Jiruu biyya Faranjii tan oriisaan isii hara nama hin fudhachiifne keessatti, yaroo hujii-rraa haftuuf wanni irratti dabarsu irbuu gaafa joollummaa afaan Oromoo tiif seene. Ragaan kanaa Kuusaa maqaa “Oromo Dictionary” moggaaseef kan jechoota afaan Inzilizii kuma soddomii ol afaan Oromoo-tti hiikee, bara 1995 maxxanse.
Kuusaan akka kitaaba Mahdii, kan fuula dhibba sagalii ol qabu, qaariyaa dhaabotaa ykn nafaqaa mootummaa tiin, namoota hedduun, kan qophaawuu malee, hujii nama tokkoo hin turre. Mahdiin garuu, karoora guddaa bara kudha torbaa ol irraa fuudhateef nafaqaan godhate, murannoo sab-boonummaa cimtuu qofa ture.
Kuusaan Mahdii guddiina afaan Oromoo haala ajaa’ibaatti Oromoo bira dabree firaa fii alagaaf mirkaneeyse. Qormaata afaan Oromoo tiif daandii haaraya saaqe. Warra irraa barachuu barbaaduuf, madda jechootaa kan dubbuuyfamee hin dhumne tahe. Sanirratti afaan Oromoo akkuma kan Ingilizii sooreeysa tahuu agarsiise.
Mahdiin Kuusaa isaa tiin haa beekkamuu malee, isa malees kitaabban Xalayootaa fii Walaloota Bariisaarratti barreeyfaman biratti, kanneen barnootaa torba maxxanse. Gama biraa tiin kitaaba seenaa tii fii kanneen biraa warra odoo hiree maxxansuu hin arkatin biraa boqote hedduu barreeysee jira.
Mahdiin guddina aadaa Oromoo tii fiis warra bu’ura lafa kaayan irraa tokko. Haala kanaaf, karoora agarsiisa aadaa Oromoo tiif, dubraa fii dardara godinaalee Oromiyaa hunda keeysaa Gurraandhala 28, bara 1976, Magaalaa Finfinneetti walitti fide warra qopheeysan keeysaa Mahdiin tokko. San malees, gaafa biyya Ameerikaa magaalaa Atlaantaa keessa jiraachaa ture, sagantaa raadiyoonaa kan Sagalee Bilisummaa moggaaseef yaroo dheertuuf mataa isaa tiin gaggeeysaa ture.
Duuba, Mahdiin, haala olii kanaan, afaan Oromoo tiif odoo hifannaa malee carraaquu, baqaysaa hidda dhiiga onnee tiif ji’a lama dura godhamteef irraa kabsachuu dadhabee, Amajjii 22, bara 2021 firaa fii aalii males, ilmaan afurii fii haadha warraa hadiyyoomsee, magaalaa Kilifland (Clivland) tan kutaa Ohaayoo (Ohio) biyya Ameerikaatti, umrii torbaatamii tokkotti, bakka kan dhalte hundi irraa hin oolletti godaane.